राधाकृष्णको अमर प्रेम : राधाको मृत्युपछि कृष्णले किन फुटाए बाँसुरी ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार राधाकृष्णको अमर प्रेम : राधाको मृत्युपछि कृष्णले किन फुटाए बाँसुरी ?
राधाकृष्णको अमर प्रेम : राधाको मृत्युपछि कृष्णले किन फुटाए बाँसुरी ?
२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार ०८:३४
भगवान् श्रीकृष्णको राधासँगको प्रेमको चर्चा आम हिन्दू समाजमा अहिले पनि महत्वका साथ हुँदै आएको छ । त्यो गहिरो प्रेम जुन विवाहमा भने परिणत हुन सकेन तर राधाको मृत्यु पछि भगवान श्री कृष्णले आफ्नो प्रिय वासुरी यसरी तोडे, जुन दोहोरिएर उनको मन र मुटुबाट त्यसपछि कहिल्यै पनि गुञ्जिएन ।
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, हरेक कृष्ण मन्दिरहरुमा तीर्थालुहरु धुमधामका साथ भगवान श्रीकृष्णको विभिन्न रुपको पूजा-आराधना गरिरहेका छन् । तर कृष्णको पूजा गर्दा राधाको नाम नलिँदा अर्थात् उनको पनि पूजा नगरिँदा कृष्णको पूजा-आराधना अपुरो मान्ने गरिन्छ । तर कृष्णको पूजा गर्दा उनीसंगै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका रुक्मिणी र सत्यभामाको भने पूजा गर्ने चलन छैन । अचम्म थप यो छ कि कृष्णको पूजा गर्दा राधाको नाम नै अगाडि लिने गरिन्छ । कृष्णको नाममा बनेका अधिकांश मन्दिरलाई पनि राधाकृष्ण नामले नै सम्बोधन गर्ने पनि गरिन्छ ।
बालगोपालको बाल्यकालको अधिकांश समय राधासंग नै बित्यो । उनीहरु बाल्यकालका हरेक कृयाकलापमा कहिल्यै पनि छुटेनन् । कृष्णले जति बाँसुरी बजाए, बाल्यकालमा त्यो सबै राधामा समर्पित थियो । राधाकृष्णको यही उमेरदेखि आरम्भ भएको प्रेम अन्तसम्म कायम रह्यो, जुन आज पनि संसारका लागि एउटा सन्देश बनेर जीवन्त छ ।तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि अचम्मको पक्ष यी दुबै एक भने कहिल्यै भएनन् अर्थात यी दुई जोडीको विवाह भने हुन सकेन ।
किन राधा र कृष्णको नाम सँगै लिइन्छ ?
जब संसारमा प्रेम र त्यागको कुरा उठ्छ, तब श्रीकृष्ण र राधाको नाम नै सदैव अगाडि आउछ । राधा र कृष्णको प्रेम सबै पक्षबाट पूर्ण थियो । यदि कृष्ण राधासँग थिएनन् भने पनि उनीहरु अलग भने कहिल्यै भएनन् । यही कारण आज आम हिन्दूले कृष्णको नाम लिँदा राधाको नाम पनि श्रद्धाका साथ सँगै लिने गरिन्छ र भन्ने गरिन्छ– राधाकृष्ण ।
कृष्ण र राधाको पहिलो विछोड
बाल्यकालदेखि नै सँगै रहेका राधा कृष्ण पहिलोपटक त्यतिबेला विछाेडिएका थिए, जब कृष्ण र बलराम मामा कंशलाई भेट्न पुगेका थिए । जतिबेला उनले मामा कंशलाई मारेर आफ्ना माता-पितालाई कंशको कारागारबाट मुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कृष्णलाई वृन्दावन फर्कने अवसर भने जुरेन । यद्यपि वृन्दावनबाट हिड्ने बेलामा श्रीकृष्णले राधालाई अवश्य पनि भेट्न आउने वचन दिएका थिए । राधाले यसबीचमा कैयौँ वर्षसम्म श्रीकृष्णको बाटो हेरिन् तर उनको चाहना पूरा हुन सकेन ।
यसबीचमा विधिको विधान पनि केही फरक पर्न गयो । उता कृष्णको विवाह रुक्मिनीसँग हुन पुग्यो । रुक्मिनीसँग विवाह गरे पनि कृष्णको मुखारविन्दबाट जहिले पनि राधाको नाम नै उच्चारण हुन भने छोडेन ।
राधाको पनि अर्कैसँग विवाह
धार्मिक ग्रन्थमा श्रीकृष्णले वृन्दावन छोडेपछि राधाको चर्चा कम भएको पाइन्छ । राधाले जहाँ पत्नीको रुपमा आफ्नो कर्म निभाइरहँदा भगवान् श्री कृष्णले पनि संसारको कल्याणको काम गरी नै रहे । रुक्मिनीसँगको विवाहपछि कृष्ण लामो समयमा द्वारिकामा रहे र प्रजाको काममा मग्न बनिरहँदा ‘द्वारिकाधीश’ नामले पुकारिन थाले ।
जब द्वारिकामा कृष्णलाई भेटिन् राधाले
राधा र कृष्ण लामो समयसम्म ‘संकेतको भाषा’मा नै कुराकानी गर्ने गर्थे । शास्त्रमा वर्णन गरेअनुरुप राधालाई द्वारिकामा कसैले पनि चिन्दैनथे । राधाको अनुरोधमा उनलाई कृष्णले आफ्नाे दरबारमा देवीकाे रुपमा नियुक्ति गरे ।
राधा दिनभर दरबारमा रहन्थिन् र दरबारको हरेक कामको हेरचाह गर्ने गर्थिन् । यसबीचमा उनलाई मौका मिल्यो भने कृष्णलाई भेट्ने गर्थिन् । तर दरबारमा उनलाई आध्यात्मिक अवसर कम जुट्दा खिन्न थिइन् । र, एक दिन कसैलाई नभनी उनले चुपचाप दरबार त्यागिन् ।
अन्तिम समयमा राधालाई भेट्न पुगे श्रीकृष्ण
राधा कृष्णको दरबारबाट बाहिर त निस्किन् तर कहाँ जाने ? उनलाई केही मेसो थिएन । तर भगवान् श्रीकृष्ण यो सबै कुराको जानकार थिए । समय विस्तारै विस्तारै घर्कदै गयो । राधा पनि आफ्नो अन्तिम समयमा एक्लै जीवन बिताइरहेकी थिइन् । जुन समयमा उनलाई भगवान कृष्णको आवश्यकता पर्न थाल्यो । राधा कुनै पनि तवरबाट श्रीकृष्णलाई देख्न चाहन्थिन् । तब भगवान् कृष्ण पनि यही अवसरमा राधाको समीपमा आइपुगे ।
श्रीकृष्णले तोडे बाँसुरी र फेरि कहिल्यै बजाएनन्
लामाे समयकाे विरहपछि कृष्णलाई आफ्नो अगाडि देखेर राधा औधी खुसी भइन् । तर त्यो समय राधाको जीवनको अन्तिम समय थियो र उनी अन्तिम सास मात्र फेरिरहेकी थिइन् । उनले आफ्नो प्राण त्यागेर संसारलाई बिदाइको हात हल्लाउन मात्र बाँकी थियो ।
राधाको अवस्थाप्रति श्रीकृष्ण जानकार थिए र उनी पनि राधाको अवस्था देखेर उदास थिए । त्यसबेला श्रीकृष्णले राधालाई केही माग्न आग्रह गरे पनि राधाले इन्कार गरिन् । श्रीकृष्णले दोहोर्याएर अनुरोध गरेपछि राधाले एकपटक बाँसुरी बजाइदिन आग्रह गरिन् । राधाको आग्रहअनुरुप श्रीकृष्णले सुरिलो धुन निकालेर बाँसुरी बजाए ।
बाँसुरीको मीठो धुनसंगै राधाले प्राण त्याग गरिन् । भगवान् भएर पनि राधाले प्राण त्यागेको देखेर श्रीकृष्ण अति बेचैन बने । र, अति दुखित हुँदै बाँसुरी फुटाएर कोशौँ टाढा फ्याँकिदिए ।
जुन ठाउँ जहाँ राधाले आफ्नो अन्तिम साससम्म श्रीकृष्णलाई पर्खिएकी थिइन्, त्यहाँ पछि ‘राधारानी’ मन्दिर बनाइयाे । जुन मन्दिर हाल भारतको महाराष्ट्र राज्यमा छ । यहाँ अझै पनि भक्तजनकाे ठूलाे घुइँचाे लाग्छ ।
Previous articleवडाध्यक्षले अरूलाई ‘तपाईं’ भन्छन् तर दलित वडा सदस्यलाई ‘तिमी’
Next articleआज कृष्णजन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्णको आराधना गरी मनाइँदै